Torohevitra 10 momba ny fanoratana SEO izay laharana | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 23, 2013 Alatsinainy Desambra 23, 2013 Douglas Karr
Tamin'ny herinandro lasa teo dia nihaona tamin'ny mpanoratra 30 teo ho eo tamin'ny iray tamin'ireo mpanjifanay izahay ary niresaka ny fomba ahafahan'ny mpanoratra ny atiny manararaotra tsara kokoa ny milina fikarohana rehefa manoratra ny lahatsoratr'izy ireo. Ny tolo-kevitray dia nifanaraka tamin'ity infographic avy amin'ny ContentVerve.
Ireo lahatsoratra nosoratan'ireto olona ireto dia efa nahagaga - noho izany dia nifantoka tamin'ny lafiny roa lehibe izahay hanatsarana.
mampivelatra lohateny mahatalanjona izay miditra ao amin'ny fihetsem-pon'ny mpamaky ary mitarika ny fahalianany hahalala ny tsindrio fotsiny.
Alao antoka fa nanangana tsy miankina ny mpanoratra fahamendrehana sy fahefana, fampiroboroboana ny atiny sy fampiakarana ny fahefana ankapobeny ho an'ny marika.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha - olan'ny olombelona ny SEO, tsy olana matematika intsony. Ny fanoratana kopia lehibe dia momba ny fakana ny sain'ny mpihaino anao. Rehefa manao an'izany ianao dia hanaraka ny motera fikarohana!
Tags: copywritingfikarohana Optimizationseo fanoratana
28 Desambra 2013 à 2:32
Misaotra tamin'ny lahatsoratra mahaliana – Heveriko fa marina ny anao, tsy mandrefy zavatra toy ny taloha i Google.
Hendry kokoa ny algorithm azy amin'izao andro izao – aleony ny votoaty mijery voajanahary.
Heveriko fa hijanona ho manan-danja ny SEO (ho an'ny orinasa) mandra-pahazoan'ny Google ny solosaina manana AI tena izy ary afaka mieritreritra - dia tsy miasa izahay!
Google+ koa dia lasa manan-danja lavitra - ny maha-mpanoratra azy rehetra.
Apr 2, 2014 amin'ny 12: 26 AM
Eny ary, ny toro-hevitra rehetra nozarainao dia mahafinaritra ary tena miasa. Nanana hevitra momba izany aho satria ny mpanoratra mpanoratra momba ny fahasalamana voajanahary-Michael Jones dia mamorona kopia SEO mifanaraka amin'izany. Fanapahan-kevitra tsara ny fandraisana ny Copywriter anao, satria mahazo tolotra fanoratana sy fivarotana eo ambanin'ny tafo iray aho. Ara-dalàna ny sarany ary betsaka ny traikefa.